Mpianatry ny Lycée privé mixte LA PIE Mampikony nifanakalo hevitra tamin’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO – Sénat de Madagascar
April 15, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Nitsidika ny Lapan’ny Antenimierandoholona Anosikely ireo mpianatra avy amin’ny kilasy voalohany amin’ny ambaratonga faharoa (seconde) avy ao amin’ny Lycée Privé mixte La Pie Mampikony, ny Alatsinainy 15 aprily 2019, izay notarihin-dRamatoa NAFEFIKO Halime talen’ny sekoly.
Niavaka tanteraka ny fandraisana azy ireo tamin’ity indray mitoraka ity satria dia niaraka nanangan-tsaina tamin’ny mpiasan’ny Antenimierandoholona izy ireo. Nandritra ity fihaonan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO sy ny mpianatra ity no nanambaràny fa ilaina ny fandraisana ny mpianatra tahaka izao mba hifanakalozan-kevitra sy hifanoroana ary ho fampahafantarana ny Lapam-panjakana. Eo ihany koa, hoy izy, ny hampifanakaiky kokoa ny mpitondra sy ny vahoaka mba tsy ho tompon-trano mihono izy ka tsy ahafantatra ny zava-misy marina ety anivon’ny Andrimpanjakana toy itony.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nitondran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO fanazavana mahakasika ny anjara asan’ny Antenimierandoholona, ny asa sy andraikitra sahanin’ny Loholona amin’ny fampandrosoana ny Firenena. Nohamafisiny ihany koa fa misy ny fisaraham-pahefana eto amin’ny Firenena dia ny fahefana mpanatanteraka, fahefana mpanao Lalàna ary ny fahefana mpitsara ka tsy tokony hifanitsaka andraikitra.
Araka ny Lalàna faha-81 ao amin’ny Lalàm-panorenana dia ny Antenimierandoholona no misolo tena mivantana ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana eo anivon’ny Fanjakana Foibe. Noho izany dia manana andraikitra amin’ny fampandrosoana ny Firenena izy ankoatry ny maha- Andrimpanjakana mpanao Lalàna azy. Ny Antenimierandoholona, hoy ihany izy , dia “Institution de Stabilité” ary mitondra ny hetaheta avy amin’ny Vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana any amin’ny Governemanta.
Nanambara ny Talen’ity Sekoly ity fa ny ankamaroan’ireo mpianatra ireo dia mbola tsy niakatra taty an-drenivohitra ary tsy mahalala ny zava-misy aty, ka izany indrindra no antony nanaovan’izy ireo izao fitsidihina izao. Nambaran’izy ireo ihany koa fa izao fitsidihana izao dia ho jery lavitra hoan’ireo mpianatra ary hampitsiry nofinofy azy ireo, mba hilofo amin’ny fianarana ka indray andro any dia izy ireo no handray anjara amin’ny sehatra fampandrosoana ny Firenena ary handimby ireo Loholona eto anivon’ity Andrimpanjakana faharoa ity.Antenimierandoholona Rivoga
Nofaranana tamin’ny fitetezan’ireo mpianatra ny efitrano fivorian’ireo Loholona, ny efitrano fanaovana ny asam-baomiera ary ny efitrano fandraisana ireo vahiny manan-kaja moa ny fotoana.